Al-Shabaab oo ku dilay qof Muslim ah Salaad ku jira – Radio Muqdisho
Al-Shabaab oo ku dilay qof Muslim ah Salaad ku jira
Kooxda Argagaxisada Al-Shabaab ayaa xalay dilay qof Muslim ah oo ku tukanayay Masaajid ku yaala Degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho.
Falkaan ay gaysatay kooxda Al-Shabaab ayaa ah mid aad uga fog diinta Islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida. wuxuuna ka dhiganyahay in ay kooxdaani diidantahay gudashada waajibka Salaada oo ah Rukniga Labaad ee Islaamku ku dhisanyahay.
Falkaan gurracan oo ay gaysatay kooxda Al-Shabaab ee ku abtirsato ururka argagaxisada ee Al-Qaacidda ayaa muujinayo in aysan waxba ku kala duwnayn Daacishta iyo Al-Shabaab ka Soomaaliya.
Garabka Al-Qaacidda ee dalka Yaman ama Afgaanistaan uma gaystaan dil Muslimiinta ku guda jiro Salaada taasoo tilmaamayso in kooxda Al-Shabaab ay yihiin argagaxisada aduunka ugu khatarta badan ayna ku gumaadaan dadka muslimiinta ah iyagoo gudanayo waajibka Salaada.
2013 ururka argagaxisada Al-Qaacidda ayaa faray laamihiisa ku firirsan aduunka in aan la beegsan karin Masaajidda iyo Suuqyada. Laakiin Al-Shabaab ayaa ah koox ku caadaysatay gumaad aan kala sooc laheeyn.
Horay ayay kooxda Al-Shabaab u qodeen Qabuuro Cullimada laga soo bilaabo 2008. Sidoo kale, Masaajid waxay ku dhax dileen Shiikh C/qadir Nuur Faarax sanadkii 2013. waxayna gumaadeen Dhaqaatiir Soomaaliyeed iyo dad bir ma gaydo ah.
Falkaan ay kooxda Al-Shabaab ka gaysatay xalay Masaajidka dhaxdiisa, ayaa ujeedkiisu yahay in aan lagu dukan Masaajidda lana oogin Rukniga Islaamiga ah ee Salaada.
Culimada Soomaaliyeed ayaa marar badan ka hadlay dhaqanada xun xun ee Maleeshiyaadka Argagixisada Al-Shabaab ay ku dhibaateeyaan Dadka Muslimiinta ah iyagoo adeegsanaya Magaca Diinta Islaamka.
Sidoo kale Culumada Al-Azhar Al-shariif ee Dalka Masar, oo ah Xarunta Diimeed ka ugu caansan Caalamka Islaamka ayaa dhowaan soo saartay Fatwo iftiimineysa sida argagixisada Al-shabaab ay u baal marsan yihiin Diinta Islaamka, kuwaas oo caadeystay daadinta Dhiigga Muslimiinta iyo ku been abuurashada Diinteenna suubban.
Askar Xulafada NATO ka tirsan oo Afghanistan lagu diley